Kim Jong-un oo xarigga ka jaray magalada "xujada ilbaxnimada" - BBC News Somali
Kim Jong-un oo xarigga ka jaray magalada "xujada ilbaxnimada"
Samjiyon waxaa la sheegay in 4,000 oo qoys ay qaadi karto.
Kuuriyada Waqooyi ayaa si rasmi ah u furtay magaalo cusub oo warbaahinteeda ay ku tilmaameen "xujada ilbaxnimada casriga ah".
Kim Jong-un ayaa xarigga cas ka jaray magaaladan oo lagu magacaabo Samjiyon - taas oo lagu tilmaamay in ay tahay mid ka mid ah mashaariicda dhismao ee ugu muhiimsan dalkaas.
Warbaahinta dowladda ee KCNA waxay sheegtay in - magaalada oo qaadi karta 4,000 oo qoys - ay leedahay guryo cusub, meel lagu qabto ciyaaraha barafka, iyo garoon iyo waxyabo kale.
Si kastaba, waxaa la sheegay in shaqaale la qasbay ay qeyb ka ahaayeen dhismaha magaalada Samjiyon.
Magaalada - xitaa haddii ay warbaahinta dalkaas xayeysiiyaan - waxay sheeko uun ku noqon doontaa shacabka Kuuriyada Waqooyi oo intooda badan saboolnimo ba'an ay ku nool yihiin.
Sida ay sheegtay hay'ad aan dowli ahayn oo lagu magacaabo Guddiga Qaran ee Kuuriyada Waqooyi, dad badan "waxay ku dhibban yihiin in ay helaan cunto, shidaal, koronto, biyo iyo waxyaabaha kale ee aasaasiga ah".
dadka ka qeybgala tartamada barafka oo u dabaaldegaya magaalada
Sidey magaalada u eg tahay?
Sida laga soo xigtay Colin Zwirko, oo ah weriyaha gaarka ah ee barta NK News, wuxuu sheegay in magaalada ay tahay mid "noocyo badan".
"Sida ay hadda u muuqato, waxay leedahay wejiyo badan iyo qaabab u gaar ah, dhismayaal si qurux badan loo naqshadeeyay oo aan u ekeyn dhisma kale oo ku yaalla magaalooyiinka Kuuriyada Waqooyi," ayuu ku yiri BBC-da.
"Qofkii dhex wareegaya Samjiyon ee dalxiis ah, kuma turunturoon doono meelo aan si wanaagsan loo hagaajin oo jidadka waaweyn ah, taas oo ah arrin ka jirta Pyongyang iyo magaalooyiinka kale."
Mr Zwirko wuxuu intaa ku daray in magaalada ay "yar tahay, laguna dhex socon karo", dhinac kastana waxay ka tahay 2-3km.
Kuuriyada Waqooyi oo sii waddo barnaamijka nukliyerka
Kim Jong-un ayaa lagu arkay xafladda xarigga looga jaray magaaladan cusub ee Samjiyon
Goormuu dhismaha billowday?
Mr Kim wuxuu booqday Samjiyon, laba sano ka hor, halkaas oo uu ka shaaciyay fulinta mashruuc "dib u dhis" ah oo aad u ballaaran.
Balse lagama dhisin meeshii kore ee dhulka magaalada.
Magaalada way jirtay ka hor dhismaha cusub. Qaar ka mid ah dhismayaasha waa la casriyeeyay, kuwa badanna waa la dumiyay, waxaana lagu baddalay dhismeyaal cusub, sida uu sheegay Mr Zwirko.
Warbaahinta dowladda waxay horey u baahisay in 450 dhisme oo cusub ay suuragal tahay in la dhiso, oo ay ka mid yihiin warshado iyo goobo madadaalo loogu talagalay.
KCNA wuxuu sheegay in magaalada lagu sameeyay "isbedel baaxad wayn", taas oo uu ku qeexay "magaalada aan caadiga ahayn ee hantiwadaagga".
Ma cadda, in qofna uu halkaas u guuray oo uu degay, laakiin magaalada waxaa horey ugu noolaa dad yar - in kastoo aysan caddeyn tiradaas hore xitaa.
Qarashka ku baxay dhismaha?
Si rasmi ah looma oga dhaqaalaha ku baxay dhismaha magaaladaas cusub.
Laakiin waxaa mashruuca la fuliyay xilli Kuuriyada Waqooyi ay saaran yihiin cunna-qabateyno dhab ah, dhameystirkeedana wuxuu muujinayaa muhiimadda ay dowladda siisay mashruucan.
Mr Zwirko wuxuu sheegay in maamulka "uu cadaadiyay fulinta mashruuca iyadoo aan la eegeyn dhaqaalaha iyo in aan la heli karin qalab dhisme oo casri ah, taas oo sabab u ah cunna qabateynta".
Tani waxay sidoo kale caddeyn u tahay in shaqaale la qasbay loo adeegsaday dhameystirka dhismaha, ayuu yiri Mr Zwirko.
"Waxaan aragnay caddeynta shaqaale la qasbay sida dadka deegaanka oo ka shaqeynayay dhismeyaasha", ayuu yiri. "Warbaahinta dowladda ayaa soo bandhigtay arrintaas, in kastoo ay ugu yeereen isxilqaamayaal."
la yaab kuma ahan dadka deegaanka in "lagu qasbo" in ay ka shaqeeyaan mashaariicda noocan ah, waxaana markasta looga baahan yahay in dhismaha ay ka shaqeeyaan ama in ay dhaqaale ku darsadaan.
"Qaarna way u hoggaansanaadaan, kuwana laaluush ayey bixiyaan si ay uga badbaadaan," ayuu yiti Mr Zwirko.
Muxuu mashruucan muhiim u yahay?
Ugu horreyn, waxay u dhowdahay Mount Paektu - waxaana loo arkaa buuraleyda laga baqo ee Kuuriyada Waqooyi, waxaana la sheegay in ay tahay meesha uu ku dhashay Kim Jong-un aabihii.
"Waxa muhiimka ka dhigaya magaaladana waa in uu ku dhashay hoggaamiyaha hadda talada haya aabihiis Kim Jong-il, sida la sheegay, waana sababta mashruuca loo dardargeliyay," ayuu yiri Mr Zwirko.
Magaalada waxaa sidoo kale laga dhigay meel ay ku deydaan magaalooyiinka kale ee Kuuriyada Waqooyi.
Khudbadiisii sannadlaha, Kim Jong-un wuxuu tusaale u soo qaatay Samjiyon, isagoo ugu yeeray "horyaalka deegaanka hantiwadaagga".
"Xafladda oo dhan, dhammaan ciidamada iyo dadka oo dhan waa in ay u soo jeestaan in la beddelo Samjiyon oo laga dhigo magaalo buuraley oo casri ah oo horyaal u ah deegaanka hantiwadaagga," ayuu ku yiri khudbadiisa.
In magaaladan cusub xarigga laga jaro waxay billow u tahay qorshe ballaaran. Waa qeybta labaad ee qorshaha weyn ee lagu hormarinayo gobolka ay magaaladan ka tirsan tahay.
Waxaa la filayaan in mashruucan gebi ahaanba la soo afjaro bisha October ee sannadkan 2020-ka.
23 Daqiiqadood ka hor